Nyocha nke Amazon Echo Dot ọhụrụ, ọgụgụ isi maka ụlọ anyị na ọnụahịa kacha mma | Akụkọ akụrụngwa
Nyocha nke Amazon Echo Dot ọhụrụ, ọgụgụ isi maka ụlọ anyị na ọnụahịa kacha mma
Karim Hmeidan | | Ngwa, Ndị na-ekwu okwu
Na zuru esi nke mebere aka, anyị ga-ekwu okwu banyere oke ndị na-ekwu okwu Amụma Amazon. Speakersfọdụ ọkà okwu si ụmụ okorobịa si online ụlọ ahịa ibu na-abịa na Alexa, a ọhụrụ mebere nnyemaaka nke na-abịa Spain ịnọ.
Na-eche echiche inweta otu n’ime ndị a n’ekwu okwu nkuzi Amazon? Site na Actualidad Gadget anyị chọrọ ịgwa gị ihe niile gbasara Amazon Echo ọhụrụ a, gịnị kpatara ụfọdụ ji enwe ọnụahịa na ndị ọzọ dị elu. Maka nke a, anyị ga-amalite na Amazon Echo Dot, nke Odi okwu kacha nta na nke di ala ala nke Amazon. Mgbe awụlikwa elu anyị na-agwa gị kedu ka ọgbọ atọ ọhụụ Amazon Echo Dot si rute Spain, ngwaọrụ dị ọnụ ala nke anyị chere na ọ bụ onye inyeaka kachasị mma n'ahịa.
Ọrụ nke Amazon Echo Dot dị mfe, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkwụnye na egwuregwu nke ndụ. Anyị kwesịrị ikwunye ya ma mepee ngwa Amazon Alexa (dị na iOS na Google Play), emesịa anyị ga-ajụrịrị Alexa maka ihe anyị chọrọ, niile n'ụzọ kachasị mma.
Alexa ga-enwu gbaa mgbanaka gburugburu ọkà okwu mgbe ọ na-emekọrịta ihe na anyịỌbụna anyị ga-ahụ mpaghara nke mgbanaka ahụ gbanwere na-acha anụnụ anụnụ dị mfe ebe olu anyị ruru Alexa. Ọ bụrụ na, mgbe ọ bụla anyị chọrọ, anyị nwere ike ogbi igwe okwu niile (nke 4 o nwere) na ịpị bọtịnụ ogbi, agbanyeghị, Alexa agaghị anụ ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na anyị anaghị ekwu okwu anwansi: Alexa. Mgbe anyị nwere igwe okwu, anyị ga-ahụ mgbanaka Alexa na-acha ọbara ọbara dị ka ịdọ aka ná ntị maka ogbi.
Banyere ụda nke Amazon Echo Dot a, anyị na-ahụ a Igwe okwu 41mm, nke ọ bụ ezie na ọ naghị enye nnukwu ụda, dị mma karịa ka anyị tụrụ anya ya na ngwaọrụ nke nha a. Echela banyere inwe nnukwu oriri na ụlọ na Amazon Echo Dot, ọ bụghị ngwaọrụ ịnụ ụtọ egwu ...
1 Ekwenyeghi n'olu onye kwuru? jiri ya mee ka ọkà okwu ọzọ mara ihe
2 Ebee ka ịzụta ihe ohuru Amazon Echo Dot?
Ekwenyeghi n'olu onye kwuru? jiri ya mee ka ọkà okwu ọzọ mara ihe
Ọ bụrụ na e nwere ihe na-adọrọ mmasị na Amazon Echo Dot a, ọ bụ ohere nke ijikọ ọkà okwu ọzọ, ma ọ bụ setịpụ ndị ọkà okwu, na mmepụta nke ọdịyo site na minijack na ọ nwere na azụ ya. Nke a ga-enye anyị ohere iji ihe ọ bụla ọzọ dị ka ọkà okwu, ma gaa n'ihu na-eji igwe okwu na ọgụgụ isi Alexa site na Amazon Echo Dot.
Nke kachasị mma: Anyị na-enweta ya site na ịzụ ọnụ ala Alexa ngwaọrụ na ahịa. Nke ahụ bụ na dị ka anyị kwuru, Amazon Echo Dot abụghị maka ndị na-ege ntị na-achọ ụda dị mma n'ime ụlọ ha, o doro anya maka 35,99 euro (59.99 euro na-enweghị nkwalite) anyị enweghị ike na-atụ anya na now na àgwà yiri ka ọkà okwu nke karịa 300 euro, ma ị ga-eji ihe anyị na-agwa gị kpọrọ ihe, na-enwe ike ịnweta a nnyemaaka nnyemaaka nke ọ bụla ọkà okwu maka a nnọọ ala price.
Ebee ka ịzụta ihe ohuru Amazon Echo Dot?
Dika anyi gwara gi na post nke anyi kwuru banyere otutu okwu nke Amazon Echo, umu okoro si Bezos choro igba ndi na-ekwu okwu ha n'uzo. ha niile no n’ahịa nwere ego nkwado. N'ihe banyere nke a Amazon ikwughachi Dot, na ọnụahịa mwepụta bụ euro 35,99, ọnụahịa belatara site na euro 59,99 nke ọ nwere na mpụga nkwalite.
Na o doro anya, ọ bụrụ na ịchọrọ inweta nke a Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla. nanị soro njikọ nke anyị tinyere gị. Enweghị ozi na a ga-eresị ya n'ụlọ ahịa anụ ahụ, mana ịzụta ya na Amazon agaghị enwe nsogbu ọ bụla.
Enwere ọtụtụ ngwugwu anyị nwere ike iji wee nweta ngwaọrụ ndị ọzọ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Foto na ụda » Ndị na-ekwu okwu » Nyocha nke Amazon Echo Dot ọhụrụ, ọgụgụ isi maka ụlọ anyị na ọnụahịa kacha mma
Nyocha nke Amazon Echo Plus, akpaaka ụlọ na ike ụda kacha mma
Amazon na-ewebata oke okwu Echo okwu na Alexa